Scalloped आलु रेसिपी - व्यंजनहरु
मेयोको साथ टाई पास्ता सलाद व्यंजनहरू
कसरी फूल मा एक स्ट्रबेरी काट्न
मक र चीज चीज सूपको साथ
गोमांस चक क्रस रिब रोस्ट नुस्खा ढिलो कुकर
Scalloped आलु रेसिपी
Scalloped आलु एक सजिलो क्लासिक नुस्खा हो, तपाईको इस्टर डिनर, क्रिसमस, थैंक्सगिभिंग वा यहाँ सम्म कि आइतवारको खानाको लागि पनि।
यस साइड डिशमा, पातलो काटिएको आलु र प्याज एक सजिलो घरेलु क्रीम सॉसमा राखिन्छ र टेन्डर, गोल्डन र बुब्ली नभएसम्म बेक्ड हुन्छ। आलु पूर्णता!
एक सजिलो क्लासिक
सबै आलु साइड डिशबाट ओभन भुटेको आलु लाई उत्तम पकाइएको आलू , केहि पनि आरामदायक खाना स्केल्पोड आलुको क्रीमयुक्त पक्ष जस्तो भन्दैन (शायद मलाई क्रीमरी बटरी बाहेक) मसलेको आलु )।
त्यसोभए Scalloped आलु के हो? इ England्ल्याण्डमा उत्पत्ति भएको हो भन्ने सोच्थे, शब्द 'स्ल्यालप' मूल रूपमा आलु कसरी काटिन्छ भनेर परिभाषा हो। पातलो र समान रूपले काटिएको आलुहरू क्यासरोल डिशमा राखिन्छ र त्यसपछि मसालेदार प्याज क्रीम सॉसले ढाकिएको हुन्छ र पकाइन्छ। नतिजा यो प्याज scalloped आलु नुस्खा हो!
आलु Yukon सुन आलु (वा रातो आलु) कोमल छाला र छीलिंग को आवश्यकता छैन (तिनीहरूले आफ्नो आकार राम्रो पकड)। रसट आलु वा आईडाहो आलुले काम गर्दछ तर अधिक टुक्र्याउँछ (तर अझै पनि राम्रो स्वाद)।
प्याज प्याज यस नुस्खा को धेरै स्वाद थप्न र एक क्लासिक घटक हो। धेरै पातलो टुक्रा।
क्रीम सॉस पिठो, मक्खन, दूध र ब्रोथको साथ बनेको द्रुत क्रीम सॉस। यदि तपाईं पनीर थप्न चाहानुहुन्छ भने, तातोबाट चटनी हटाउनुहोस् र मुट्ठीभर वा दुई चुरे पनीरमा चलाउनुहोस्। यो सासको तापबाट पग्लनेछ।
मौसम यस नुस्खाको साधारण मौसममा नुन, मिर्च, प्याज, लसुन समावेश छ। थाईम, रोजमेरी, अजमोद सहित तपाइँको आफ्नै मनपर्नेहरूमा थप्नुहोस्।
Scalloped आलु कसरी बनाउने
Scratch बाट scalloped आलु बनाउन को लागी समय लाग्छ तर यो सजिलो छ। जबकि साँचो scalloped आलु पनीर छैन, हामी कहिलेकाँहि अलि अलि थप्दछौं!
पातलो स्लाइस आलु र प्याज।
घरेलु चटनी बनाउनुहोस् (तल नुस्खा)
तह आलु, प्याज र सॉस। कभर र बेक गर्नुहोस्।
पन्नी हटाउनुहोस् र अझ बढी बेक गर्नुहोस्, यस चरणले स्केलप गरिएको आलुहरूमा स्वादिष्ट खैरो शीर्ष सिर्जना गर्दछ
महत्वपूर्ण सास गाढा गर्न अनुमति दिनको लागि २० मिनेट अघि कूल गर्नुहोस्।
सही Scalloped आलू को लागी सुझावहरु
आलु काट्नुहोस् समान रूपमा scalloped आलु समान रूपमा पकाउनु सुनिश्चित गर्न
प्रयोग गर्नुहोस् मन्डोलिन यस कामलाई थप छिटो बनाउनको लागि (a) One २ mand मन्डोलाइन यस मनपर्‍यो एक महान काम गर्दछ र तपाइँ धेरै समय बचाउनेछ)
TO अदुवा को लागि आधार हो मलाईदार सॉस । एक राउक्सको अर्थ केवल फ्याट पकाउनु हो (यस अवस्थामा बटर) र पिठो र सास बनाउन तरल जोड्नुहोस्!
यदि तपाइँ निर्णय गर्नुहुन्छ चीज थप गर्नुहोस् सासमा (जुन वास्तवमै यसलाई बनाउनेछ आलु Arat Gratin ) स्टोभबाट चटनी निकाल्नुहोस् र १/२ देखि २ कप चीजमा चलाउनुहोस् (सेडर / ग्रुइयर राम्रो विकल्प हो)।
सीजन तह बीच नुन र कालो मिर्च संग आलु।
यो बेकिरहेको बेला पन्नीले छोप्नुहोस्, यसले स्टीम गर्न दिन्छ र विललाई अलिक छिटोमा पुर्‍याउँछ।
समय अगाडि Scalloped आलु बनाउन
यो समय भन्दा पहिले (र सेवाको दिनमा छिटो खाना पकाइराख्न) बनाउनको लागि हामीले आंशिक रूपमा यसलाई बेकिंगमा राम्रा नतीजाहरूको परीक्षण गरेका छौं।
क्लाउड दहीले बनेको क्लाउड रोटी
बेक गर्नुहोस् पकवान -०-60० मिनेट को लागी कभर।
ओभनबाट र हटाउनुहोस् राम्रो पूर्ण रूपमा काउन्टरमा (तिनीहरूलाई छोप्नुहोस्, स्टीमले खाना पकाउन मद्दत गर्दछ)।
राम्रोसँग कभर गर्नुहोस् र फ्रिज गर्नुहोस् ।
सेवा दिन, बेकिंग कम्तिमा minutes० मिनेट पहिले फ्रिजबाट हटाउनुहोस्। बेक को बारे मा minutes 35 मिनेट को माध्यम बाट वा गरम को माध्यम बाट खुला भयो।
अधिक आलू रेसिपीहरू तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ
दुई पटक पकाएको आलू - अगाडि बढ्नुहोस् र स्थिर गर्नुहोस्!
सजिलो ओभन भुटेको आलु
लोड गरिएको मैश आलु केक - छोडेको लागि महान।
दुई पटक पकाएको आलु क्यासरोल
चीसी हाम र आलु क्यासरोल
बेक्ड आलु सूप - सजिलो हप्ताको भोजन
तयारी समय25 मिनेट कुक समय१ घण्टा बीस मिनेट आराम गर्ने समयपन्ध्र मिनेट कुल समय१ घण्टा चार मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन Scalloped आलु उत्तम आलु क्यासरोल हो! एउटा क्रिम प्याजको चटनीमा टेन्डर आलु गोल्डन पूर्णतामा पकाइएको। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ ठूलो प्याज पासा
▢दुई लौंग लसुन कीमा
▢¼ कप पीठो
▢दुई कप दूध
▢१ कप कुखुराको ब्रोथ
▢¼ चम्मच खुर्सानी
▢3 पाउन्ड सेतो आलु ⅛ 'मोटाको बारेमा काटिएको
ओभरलाई ˚˚०˚F मा पुर्‍याउनुहोस्।
सास बनाउनका लागि मध्यम तातोमा माखन, प्याज र लसुन पग्लनुहोस्। प्याज नरम नभएसम्म कुक, लगभग Cook मिनेट। पीठो थप्नुहोस् र १-२ मिनेट पकाउनुहोस्।
तातो कम गर्न। दुध र शोरबालाई जोड्नुहोस्। गाढा गर्न whisking एक पटक मा एक सानो रकम जोड्नुहोस्। मिश्रण धेरै बाक्लो हुनेछ, एक पटक मा स्वाइकिंग एक पटक मा तरल को एक सानो बिट थप्न जारी।
एकपटक सबै तरल पदार्थहरू थप गरिसकेपछि, मध्यम आँचमा उमालेको मासु लानुहोस्, जसरी व्हिसक गर्न जारी राख्नुहोस्। नुन र मरिच मा चलाउनुहोस् र एक मिनेट उमाली दिनुहोस्।
ग्रीस एक 9'x13 'बेकिंग डिश। तल and मौसममा नुन र मरिच संग आलुको pepper राख्नुहोस्। शीर्षमा क्रीम सॉस सासको P राख्नुहोस्।
परतहरू क्रिम सॉसको साथ समाप्त हुने दोहोर्याउनुहोस्। Cover Cover मिनेट को लागी आवरण र बेक गर्नुहोस्।
पत्ता लगाउनुहोस् र थप-35-4545 मिनेटसम्म बेक गर्नुहोस् वा सुनौं खैरो र आलु कोमल हुन्छन्। सुनौलो शीर्ष प्राप्त गर्न Bro- minutes मिनेट को लागी ब्रिल गर्नुहोस्।
सेवा गर्नु अघि १ minutes मिनेट आराम गर्न अनुमति दिनुहोस्।
क्यालोरिज:२66,कार्बोहाइड्रेट:39g,प्रोटिन:9g,मोटो:एघारg,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:०मिलीग्राम,सोडियम:4 484मिलीग्राम,पोटासियम:११२२मिलीग्राम,फाइबर:6g,चिनी:।g,भिटामिन ए:5 465IU,भिटामिन सी:.8०.मिलीग्राम,क्यालसियम:१9।मिलीग्राम,फलाम:7.7मिलीग्राम
कीवर्डScalloped आलु कोर्सअतिरिक्त खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
Scalloped र Au Gratin आलुको बीच के भिन्नता छ?
आलु Au Gratin चिनी आलु पनि भनिन्छ किनकि सेतो सास वास्तवमा पनीर सास हो (र तिनीहरूले प्राय: लेयरहरू र / वा ब्रेडक्रम्ब टोपिंग बिच पनी छिर्काइन्छ)।
यो स्केलोप गरिएको आलु रेसिपी (पक्कै पनि) पनीरको साथमा हुन सक्छ वा चीज थपिएको हुन्छ तर कहिलेकाँही मलाई पनीरबिना यस नुस्खामा सरलता मनपर्दछ। प्याज र मिठोको मिठास यी काटिएका आलुहरूमा उत्तम थप छ!
तपाईं Scalloped आलु फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ?
यी आलुहरू फ्रिजमा लगभग days दिनसम्म राख्दछन् र माइक्रोवेभ, ओभन वा फ्राई pan प्यानमा राम्रोसँग गरम गर्दछन्! यदि तपाईं तिनीहरूलाई लामो स्थिर गर्न चाहनुहुन्छ भने, हो, स्केलोप गरिएको आलु स्थिर गर्न सकिन्छ!
लगभग कुनै क्यासरोल डिश थोरै जान्न-कसरी को साथ पूर्ण रूपमा स्थिर गर्न सकिन्छ। यदि फ्रिजरको खाना बनाउने हो भने, स्कालोप गरिएको आलु फ्रिज गर्ने उत्तम तरिका भनेको तिनीहरूलाई सम्पूर्ण तरिकाले नपकाउनु हो, तर अलि अण्डर कुक राख्नु हो। त्यसोभए, एक पटक तिनीहरू फ्रिजमा चिसो भएपछि, तपाईं आफूले चाहेको तरिकामा भाग दिनुहोस् र फ्रीजरमा राख्नु अघि सावधानीपूर्वक बेर्नुहोस्। पुनः गरम गर्न, केवल पग्लनुहोस् र पकाउने समाप्त गर्नुहोस् जबसम्म आलु फेरि टेन्डर हुँदैन!
जबकि यो एक उत्तम विकल्प हो, प्राय जसो हामी बाँकी रहेका चीजहरू स्थिर गर्न चाहन्छौं। यस अवस्थामा, यी स्केलोप गरिएको आलुहरू राम्रोसँग स्थिर गर्दछन्, यद्यपि मलाई तिनीहरू कहिले पनी पुनः गरम हुँदा केही बेर टुक्रिने पाउँदछन् तर उनीहरू अझै उत्कृष्ट स्वाद लिन्छन्!
यस विलक्षण कासरोललाई पुन: नवीकरण गर्नुहोस्